(Redirected from Muvandu wemishonga)
1 Rheti yeBingurudzo reMishonga
Helium haipingurwi zviri nyore nemimwe mishonga.
Gold haipingurwi nemhepo sezvinoita Iron inobuditsa ngura.
MaZulu vanoti phengu (ideophone of turning over. reversing, changing). Mamwe mazwi: phenguka (v.intr. Turn over, change; become reversed.).
MaZulu] vanoti phengula (v.tr. Turn over, reverse; change; controvert.). Mamwe mazwi: phengulula (v. Turn right over; absolutely reverse; change entirely).
VaTsonga vanoti angula (v. react). Mamwe mazwi: nhlamulo kana mpfindluko (n reaction).
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rupinguro_rweMishonga&oldid=82049"
This page was last edited on 29 Mbudzi 2020, at 14:11.